Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada Unicefe oo Kawalaacsan Xaalada Ciyaalka Itoobiya.
Hay’ada Unicefe oo Kawalaacsan Xaalada Ciyaalka Itoobiya.
Warbixin dheer oo ay soosaartay Hay’ada UNICEFE ayaa lagu sheegay in dhalaanka kudhaqan wadanka Itoobiya ay kujiraan xili adag oo hadii aan wax laga qabanin sababi karta masiibo bini’aadam nimo oo wadankaas kadhalata.
Hay’ada Unicefe ayaa sheegtay in tirada ciyaalka ee wadanka gudihiisa kuqaxday ay kor udhaafayso 2.8 milyan kuwaas oo hada kusugan deegaano ay baro kacayaal kuyihiin, hay’ada ayaa sidoo kale sheegtay in ay tirada barakacayaashu wali siikordhayso.
Hay’ada ayaa qoraalkeeda kusheegtay in 6 bilood kahor dadka qaxay ay ahaayeen 1.6 milyan, waxayna hay’adu sheegtay in ay tiradu si dhakhso ah usii kordhayso, walina barakcayaashu ay qulqulayaan.
Hay’ada Unicefe ayaa kadigtay masiibada kadhalan karta barakacayaasha ciyaalka ubdan ee deegaanadoodii kaqaxaya isla markaana tagaya deegaan aysan noloshiisa iyo dabeecadiisa midna aqoonin, sidoo kale hay’ada ayaa sheegtay in dadkaasu aysan helin agabkii ay ubaahnaayeen.
Barakacayaasha ayaa ubadan Oromo iyo Soomaali kuwaas oo dagaal mudo socday uusababay dhimasho, dhaawac iyo barokac aad ubadan, waxayna nodeen gobolada dadka ugu badan ay kaqaxeen.
Sidoo kale waxaa Gobolada kale ee Itoobiya kaqaxay dad aad ubadan oo dhamaantood kaqaxay dhibaatooyinka qoomiyadaha io qalalaasihii uu wadanku galay.